सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर बास्तविकता यही हो ! आमा बन्दै छिन नायिका श्वेता खड्का ! – Khabar PatrikaNp
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर बास्तविकता यही हो ! आमा बन्दै छिन नायिका श्वेता खड्का !
January 13, 2021 1042
सुन्दा अ’चम्म लाग्न सक्छ , तर यो सत्यता नै हो ! आमा बन्दै श्वेता खड्का चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट नेपाली चलचित्रमा प्रवेश गरेकी अभिनेत्री श्वेता खड्काले नयाँ चलचित्रमा काम गर्ने भएकी छन। उनी अभिनीत चलचित्र ‘कान्छी’ दुई वर्षअघि प्रदर्शनमा आएको थियो। अहिले आफ्नो व्यापार व्यवसायमा ध्यान दिँदै आएकी उनी यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा बन्न लागेको नयाँ चलचित्रमा अनुबन्धित भएकी हुन् । *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
चलचित्रमा छोरीको भूमिकामा सेड्रिना शर्मालाई लिने प्रयास भइरहेको छ। डेब्यु चलचित्र ‘कहाँ भेटिएला’ बाट लभर गर्लको भूमिकामा देखिँदै आएकी श्वेतालाई पहिलो पटक दर्शकले भिन्न भूमिकामा देख्न पाउनेछन्। चलचित्रमा उनको केन्द्रीय भूमिका छ। चलचित्रमा समावेश अन्य कलाकार तथा प्राविधिकको जानकारी कही समयमा गराउने निर्देशक थापाले बताए। *** भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला **
Prevआज पुष महिनाकाे अन्तिम दिन पत्याउनै नसकिने गरि यस्तो भयो सुनको भाउ !
Nextसांसद को सरकारी गाडी घाँस बोक्ने र तरुनी बोक्ने गरेको पाईएपछि अज्ञात समूहले गरे आगजनी !
वरिष्ट नेता माधव कुमार नेपाल, रावल र पाण्डेसहित पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे
साउदी अरेबियामा कार्यरत ८२ जना नेपालीको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ?
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (21216)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20100)